Thenga i-Obeticholic Acid powder (459789-99-2) hplc =98% | I-AASraw
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Obeticholic Acid powder
SKU: 459789-99-2. Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-mass mass ye-Obeticholic Acid powder (459789-99-2), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-Obeticholic acid powder isetshenziselwa ukwelapha i-PBC kubantu abadala futhi ngezinye izikhathi isetshenziselwa esinye isidakamizwa esibizwa nge-ursodeoxycholic acid (UDCA). I-primary biliary cholangitis (PBC) isifo esiqeda isibindi esiqeda kancane kancane ama-bile emaceleni esibindi.
I-Obeticholic Acid powder ividiyo
I-Obeticholic Acid powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Formula Yamamolekhula: C26H44O4
I-Melt Point: I-108-110 ° C
I-Obeticholic Acid powder ku-Antineoplastic Agent ukusetshenziswa
Igama elijwayelekile: i-Obeticholic Acid powder (oh BET i KOE id AS id)
Igama logama: Ocaliva
Ukusetshenziswa kwe-Obeticholic Acid powder
Le mithi isetshenziselwa yodwa noma yokwelashwa ngokuhambisana nesifo esithile sesibindi (isisekelo se-biliary cholangitis-PBC). Lesi sifo sishabalalisa kancane kancane ama-bile amadokodo esibindi. Uma izidakamizwa ze-bile zonakalisiwe, izinto eziyingozi zingakha i-bile futhi zisa isibindi. I-Obeticholic Acid powder isebenza ngokubangela isibindi sakho ukuba sibe nesibindi esincane, futhi ngokusiza i-bile iphuma esibindi. I-Obeticholic Acid powder ingasiza ukuwohloka okuncane kwe-cholangitis eyinhloko nokunciphisa izimpawu ezifana nokukhathala, isikhumba esibuhlungu, ubuhlungu besisu, neso omile nomlomo.
Iyiphi isilinganiso se-Obeticholic Acid powder
Ukusebenzisa i-Adult Dose ye-Biliary Cirrhosis
Isilinganiso sokuqala: 5 mg ngomlomo kanye ngosuku
Isilinganiso sokulondoloza: 5 mg ngomlomo kanye ngosuku; uma ukunciphisa okwanele ku-alkaline phosphatase (ALP) kanye / noma inani elilodwa le-bilirubin alitholakali emva kwezinyanga ze-3, ukwandisa umthamo ku-10 mg ngomlomo once ngosuku
Isilinganiso esikhulu: 10 mg / usuku
Isebenzisa: Ukwelashwa kwe-cholangitis eyinhloko ye-biliary:
-Njengama-monotherapy kubantu abadala abakwazi ukubekezelela i-ursodeoxycholic acid (UDCA)
-Ihlanganiswa ne-UDCA kubantu abadala abanempendulo enganele ku-UDCA
Akukho ukulungiswa okuphakanyisiwe.
Ukukhubazeka kwesibindi esincane (i-Child Pugh Class A): Akukho ukulungiswa okunconyiwe.
Ukungasebenzi kahle kwesibindi (Child Pugh Class B no C):
-Isilinganiso sangaphakathi: 5 mg ngomlomo kanye ngesonto
- Umthamo wokunakekela: 5 mg ngomlomo kanye ngesonto; uma ukunciphisa okwanele ku-ALP kanye / noma inani eliphelele le-bilirubin alitholakali ngemva kwezinyanga ezingu-3, ukwandisa umthamo ku-5 mg izikhathi ezingu-2 ngesonto (okungenani izinsuku ezingu-3 ngaphandle), futhi kamuva ku-10 mg izikhathi ezingu-2 ngesonto (okungenani izinsuku ezingu-3 ngaphandle ) kuncike ekuphenduleni nasekubekezeleleni
- Umthamo omkhulu: 10 mg / ngosuku
-Iziguli kufanele zihlolwe ukuze kwenzeke ukuphendula okubi okuhlobene nesibindi
-Izingozi ezingase zibe khona kufanele zilinganiswe nezinzuzo ezigulini ezinomlando wezimpikiswano ezibi kakhulu ezihlobene nesibindi.
Iziguli ezinama-pruritus angenelutho:
-Engeza i-antihistamine noma i-bile acid ebopha i-resin
-Nciphisa umthamo ku-5 mg zonke izinsuku (iziguli ezingahambisani nomthamo wansuku zonke we-5 mg) noma i-5 mg ngomlomo kanye ngosuku (iziguli ezingahambisani nomthamo wansuku zonke we-10 mg)
-Vimbela ukwelashwa kuze kube amasonto e-2, bese uqale kabusha ngomthamo ophansi
-Cabanga ukuyeka ukuphuma kwezigulini ezinokuqhubeka okuqhubekayo, okungenakubekezelelwa.
I-obeticholic Acid powder isetshenziselwa yedwa noma ihlanganiswe ne-ursodiol (i-Actigall, i-Urso) ukuphatha i-cholangitis eyinhloko ye-biliary (PBC; uhlobo lwesifo sesibindi esibhubhisa ama-bile, okuvumela i-bile ukuba ihlale esibindi futhi ibangele umonakalo) kubantu abangakwazi uthathe i-ursodiol noma kubantu abangazange baphathwe ngempumelelo nge-ursodiol yedwa. I-Obeticholic Acid powder isigaba semithi ebizwa ngokuthi i-farnesoid X receptor agonists. Isebenza ngokunciphisa ukukhiqizwa kwe-bile esibindi futhi kwandise ukususwa kwe-bile esibindi.
Ngaphambi kokuthatha i-Obeticholic Acid powder, tshela udokotela noma umuthi wakho wezokwelapha uma uphethwe yilezifo; Lo mkhiqizo ungaqukatha izithako ezingasebenzi ezingabangela ukusabela kokugula noma ezinye izinkinga. Khuluma nemithi yakho yezemithi ukuthola imininingwane eyengeziwe.
Ngaphambi kokusebenzisa le mithi, tshela udokotela wakho noma ummithi umlando wakho wezokwelapha, ikakhulukazi: ukuvinjelwa kwe-bile duct.
Ngaphambi kokuhlinzwa, tshela udokotela wakho wamazinyo noma yonke imithi oyisebenzisayo (kufaka phakathi izidakamizwa zemithi, izidakamizwa ezingekho emthethweni, nemikhiqizo yemithi).
Ngesikhathi sokukhulelwa, le mithi kufanele isetshenziswe kuphela uma kudingeka. Xoxa ngezingozi nezinzuzo nodokotela wakho.
Akukwaziwa uma le mithi idlula ubisi lwebele. Bheka udokotela wakho wokudla ngaphambi kokudla.
I-Obeticholic Acid Powder Raw
Ingabe i-Obeticholic Acid powder Yinoma yimiphi imiphumela emibi
Ukukhathala, ubuhlungu bomlomo / umphimbo, noma ukushaya kwenhliziyo okusheshayo / okulimazayo kungenzeka. Uma enye yalezi zimo zigcina noma ziba zimbi kakhulu, tshela udokotela wakho noma ummithi ngokushesha.
Khumbula ukuthi udokotela wakho usememezele le mithi ngoba uye wahlulela ukuthi inzuzo kuwe inkulu kunengozi yemiphumela emibi. Abaningi abasebenzisa le mithi abanemiphumela emibi kakhulu.
Nakuba le mithi isetshenziselwa ukwelapha i-cholangitis eyinhloko ye-biliary (PBC), ingase ibangele ukuwohloka kwesinye isibonakaliso sesibindi. Tshela udokotela wakho ngokushesha uma unezimpawu ezifana nokushaya isikhumba esisha noma esibi kakhulu, isicanucanu / ukuhlanza okungavumi, ukulahlekelwa isifiso, ubuhlungu besisu / esiswini, ukuphuza amehlo / isikhumba, umchamo omnyama, ubuhlungu besisindo / ohlangene, imilenze yokuvuvukala / izinyawo / isisu, izinguquko zengqondo / kwemizwa. Udokotela wakho angase anikeze ezinye izidakamizwa ezifana ne-bile acid-binding resins noma ama-antihistamine, noma umise okwesikhashana / ulungise umthamo wakho wemithi ukuze usize ukuphatha eminye imiphumela emibi. Khuluma nodokotela wakho mayelana nezingozi nezinzuzo zokuthatha le mithi.
Ukusabela okweqile kakhulu kulo muthi akuvamile. Kodwa-ke, thola usizo lwezokwelapha ngokufanele uma ubona noma yiziphi izimpawu zesenzo esibi kakhulu, okubandakanya: ukuqhuma, ukuvuthwa / ukuvuvukala (ikakhulukazi ebusweni / ulimi / umphimbo), isiyezi esinzima, ukukhathazeka ukuphefumula.
Lokhu akulona uhlu oluphelele lwemiphumela emibi. Uma ubona eminye imiphumela engabhalwanga ngenhla, thintana nodokotela noma wezemithi.
Indlela yokuthenga i-Obeticholic Acid powder kusuka ku-AASraw